fmradiobroadcast.com ရှိ 20KW UHF အင်နာလော့တီဗီ Starpoint ပေါင်းစပ်မှုများ
ရေဒီယို Turnkey ဖြေရှင်းချက်များ
TV Turnkey ဖြေရှင်းချက်
FM ရေဒီယိုလိုင်းများ ပက်ကေ့ချ်များကို ပြီးအောင်လုပ်ပါ။
FM ရေဒီယို Studio Packages
FM Transmitter Packages များ
FM Antenna စနစ် အစုံအလင်
FM ရေ transmitter
ရေဒီယို စတူဒီယို စက်ပစ္စည်း
Hot Sale FM
IP ကျော် STL
STL Link Transmitter များနှင့် လက်ခံသူများ
STL ရေဒီယိုလင့်ခ် ထုတ်လွှင့်စက်များ
STL ရေဒီယို လင့်ခ်လက်ခံသူများ
FM Transmitter သီအိုရီများ
TV Transmitters သီအိုရီများ
FM Antenna သီအိုရီများ
TV Antenna သီအိုရီများ
UHF Starpoint Combiner
20kW UHF အင်နာလော့တီဗီ Starpoint Combiner 20000W တီဗီစခန်းအတွက် ATV ဘဏ်ခွဲပေါင်းစု
အလတ်စား ပါဝါ (50W-1KW)
အလတ်စား ဓာတ်အား (<1KW)
စွမ်းအားမြင့် (> 1KW)
RF Dummy Load
စျေးနှုန်း (USD): ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။
အရေအတွက် (PCS): ၁
ပို့ဆောင်ခ (USD): ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
စုစုပေါင်း (USD): ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
ပို့ဆောင်မှုနည်းလမ်း- DHL၊ FedEx၊ UPS၊ EMS၊ ပင်လယ်၊ လေကြောင်း
ငွေပေးချေမှု- TT(ဘဏ်ငွေလွှဲ)၊ Western Union၊ Paypal၊ Payoneer
ကို Select လုပ်ပါ
FMUSER 20KW UHF Analog TV Starpoint Combiner
အကောင်းဆုံးဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ UHF ATV Starpoint Combiner ?
FMUSER သည် ရာစုနှစ်ထက်ဝက်နီးပါး ထိပ်တန်း အသံလွှင့်ကိရိယာ ပေးသွင်းသူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ 2008 ခုနှစ်မှစတင်၍ FMUSER သည် ကျွမ်းကျင်သောအင်ဂျင်နီယာ developer များနှင့် စေ့စပ်သေချာစွာ ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့၏ ဝန်ထမ်းများအကြား တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် လုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ စစ်မှန်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် စိတ်အားထက်သန်မှုမှတစ်ဆင့် FMUSER သည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအရှိဆုံး အီလက်ထရွန်နစ်အစိတ်အပိုင်းအချို့ကို ယမန်နေ့က စမ်းသပ်ထားသော အခြေခံမူများကို အသုံးပြုကာ ယနေ့ခေတ်၏အဆင့်မြင့်သိပ္ပံပညာကို ပေါင်းစပ်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂုဏ်ယူဆုံးသော အောင်မြင်မှုများထဲမှ တစ်ခုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူများစွာ၏ ရေပန်းစားသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုသည် တီဗီဌာနအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းစနစ်ဖြစ်သည်။
"FMUSER မှ ကောင်းမွန်သောအရာအချို့ကို သင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် TV Transmitter Combiner၊ ရောင်းရန်အကောင်းဆုံး UHF Combiner အတွက် ပါဝါအမျိုးမျိုး၊ 8kw ​​မှ 25kw အကြား ပါဝါ၊"
- - - - - FMUSER ၏သစ္စာရှိအဖွဲ့ဝင် James
နောက်အပိုင်းကတော့ UHF Combiner အသုံးပြုခြင်းအတွက် အကြံပြုချက် | ကြိုးခုန်
ဒီPage မှာ မင်းကိုဘာတွေယူဆောင်လာတာလဲ။
အကောင်းဆုံး UHF Analog TV Starpoint Combiner ကို ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။
UHF Combiner အသုံးပြုခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်
Broadcast Station အတွက် RF Combiner ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
အဘယ်ကြောင့် UHF Combiner လိုအပ်သနည်း။
FM Star Point Combiner ဆိုတာဘာလဲ
FM Combiners အလုပ်လုပ်ပုံ
FMUSER Multi Channels 20KW UHF Analog TV စတားမှတ် Combiner တွင် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်သည်-
ပြည်နယ်၊ စည်ပင်သာယာရေးနှင့် မြို့နယ်အဆင့်ရှိ ကျွမ်းကျင်ရုပ်သံလိုင်းများ
အလတ်စားနှင့် ကြီးမားသော ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများသည် အလွန်ကျယ်ပြန့်စွာ လွှမ်းခြုံထားသည်။
ပရိသတ် သန်းပေါင်းများစွာရှိသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တီဗီလိုင်းများ
ကြီးမားသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တီဗီပစ္စည်းများကို စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ဝယ်ယူလိုသော TV အော်ပရေတာများ
ကမ္ဘာ့အဆင့်မီစက်ရုံ၊ FMUSER ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အသံလွှင့်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ 10 နှစ်ကျော်ကြာ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထုတ်လွှင့်မှုဖြေရှင်းချက်များအား ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများ၏ အမျိုးအစားအားလုံးကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့သည်မှာ သေချာသည်မှာ သေချာသည်မှာ အဝင်နှင့်အထွက်များစွာပါဝင်သည့် စွမ်းအားမြင့်ထုတ်လွှင့်မှုပေါင်းစပ်ကိရိယာဖြစ်ပြီး မျှဝေထားသော FM အင်တာနာများဖြင့် FM ပရိုဂရမ်များစွာကို ထုတ်လွှင့်ရန်အတွက် အသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။
အပ္ပနာဟိ 20kW မြင့်မားသော Power 470-862 MHz UHF Starpoint ပေါင်းစပ်ကိရိယာ တိုးမြှင့်ထုတ်လွှင့်မှုလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး အင်တင်နာတာဝါတွင် နေရာလွတ်မရှိခြင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ UHF ဆိုတာကို အားလုံးသိပါတယ်။ အကိုင်းအခက် ရုပ်မြင်သံကြားဌာနများအတွက် ပေါင်းစည်းပေးသူဟုလည်း ခေါ်သည်။ Starpoint ပေါင်းစပ်သူ သို့မဟုတ် ကြယ်အမျိုးအစား ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၊ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းစနစ် နည်းပညာသည် တီဗီထုတ်လွှင့်သူများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ထုတ်လွှင့်မှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
TV antenna သည် လုံလောက်သောပါဝါစွမ်းရည်နှင့် TV ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် လုံလောက်သောပါဝါပမာဏနှင့် ကြိမ်နှုန်းအပြည့်ရှိသော ကျယ်ပြန့်သောအင်တင်နာဖြစ်ရန် လိုအပ်သည်။ မတူညီသောလည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းများအတွက်၊ ရပ်နေသောလှိုင်းအချိုးကို စံနည်းပညာအဆင့်အထိ ကိုက်ညီစေရန်အတွက် အမျိုးမျိုးသော လျော်ကြေးနည်းလမ်းများ လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် ဤ UHF ပေါင်းစပ်ကိရိယာအား အသံလွှင့်ဌာနအတွက် ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစနစ်တစ်ခုအဖြစ် အများဆုံးအသုံးချနိုင်စေသည်။
အဆိုပါ FMUSER 20kW UHF ATV ပေါင်းစပ်စက်ရောင်းရန်ရှိသည်။အဆင့်မြင့် RF နည်းပညာနှင့် နောက်ဆုံးပေါ် CAD နည်းပညာကို အသုံးချသည့်၊ စုစုပေါင်း အပေါက်4ခု ပါရှိပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် TV solid-state TV transmitter အချို့မှ အချက်ပြမှုများကို ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။ ၎င်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံရှိ RF နည်းပညာရှင်များမှ နှစ်များအတွင်း အနှောင့်အယှက်မရှိ ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး တီထွင်ထားခြင်းဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဤအရာဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောပါဝါ UHF ပေါင်းစပ်စက်ရောင်းရန်ရှိသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရည်အသွေးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် လာပါသည်။
သင်သည် လူသစ် သို့မဟုတ် RF ထုတ်လွှင့်မှုနည်းပညာတွင် ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါစေ၊ ၎င်းကို သိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ multi-channels transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး တီဗီထုတ်လွှင့်မှုစနစ်တွင် ရှေ့နှင့်အောက်ပါအရာများကြား ချိတ်ဆက်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ မတူညီသောချန်နယ်များအတွက် transmitter ၏ output များကို ချန်နယ်တစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်ပြီး အင်တာနာတစ်ခုအား များစွာအသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနများအတွက် ရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်ကိရိယာ။
အင်တင်နာသည် ဈေးကြီးပြီး အင်တင်နာတာဝါတွင် အကန့်အသတ်ရှိသော အင်တာနာများသာ ရှိနိုင်သောကြောင့် Starpoint UHF ပေါင်းစပ်ကိရိယာသည် တီဗီထုတ်လွှင့်မှုစနစ်၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်သည်။
FMUSER သည် မတူညီသော ကာဗာများဖြစ်သည်။ transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာများရောင်းရန်ရှိသည်။UHF နှင့် VHF ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၊ FM ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၊ ဟန်ချက်ညီသောပေါင်းစပ်ကိရိယာ (CIB)၊ ကြယ်အမျိုးအစားပေါင်းစည်းသူ (အကိုင်းအခက်ပေါင်းစပ်သူ)၊ ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်ကိရိယာ စသည်တို့သည် လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ဤထုတ်ကုန်သည် အံဝင်ခွင်ကျ အငြိမ်းစားယူခြင်းကို ရရှိပြီး မတူညီသော ပါဝါအဆင့်များနှင့် မော်ဒယ်အမျိုးမျိုး ပေါင်းစပ်မှုများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ သီးသန့် ကြိုးမဲ့ ကြိမ်နှုန်း ထုတ်လွှင့်မှု ဖြေရှင်းချက် နှင့် စနစ်ရှိ အလုံးစုံ အပြင်အဆင် သည် စစ်ထုတ်ခြင်းကို ပြန်သုံးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ FMUSER မှ UHF Starpoint ပေါင်းစပ်ကိရိယာများကို ဝယ်ယူပါ။ စနစ်ဂီယာဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး သင့်ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေနိုင်သည်။
▲ အကောင်းဆုံး UHF Combiner ▲ ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ
▲ အကြောင်းအရာသို့ ပြန်သွားရန် ▲
20kW UHF Analog TV Starpoint Combiner ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်
ယခင်အပိုင်းကတော့ အကောင်းဆုံး UHF Combiner ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ | ကြိုးခုန်
နောက်အပိုင်းကတော့ Broadcast Station အတွက် RF Combiner ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။ | ကြိုးခုန်
ပေါင်းစပ်ကိရိယာသည် FM transmitter ထက် ပါဝါပိုရှိသော passive device တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ချိန်ညှိပြီးနောက်၊ ၎င်းကို ထပ်မံချိန်ညှိရန် မလိုအပ်ပါ။ ဟိ UHF ပေါင်းစပ်ကိရိယာ ၄ ခု အင်တင်နာတစ်ခုတည်းမှ အများအပြားကို ထုတ်လွှင့်ရန် လိုအပ်သောအခါတွင် လိုအပ်ပါသည်။ သင့်လျော်သောပေါင်းစပ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ အချက်ပြမှုများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု၏ transmitter များတွင် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်ပြီး intermodulation ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။
20kW UHF ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို အသုံးပြုသည့်အခါ သိထားရမည့်အချက်များစွာ
အကယ်၍ သင်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသံလွှင့် အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါက၊ ၎င်းကို သင်မည်ကဲ့သို့ ရင်းနှီးနေရန် လိုအပ်ပါသည်။ rack room မှာ အသံလွှင့်ပေးရတယ်။ FM အသံလွှင့်စက်များ၏ အခြေခံမူများ၊ ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာနများ အပါအဝင် လုပ်ငန်းခွင်၊ တီဗီ ထုတ်လွှင့်မှု အသံလွှင့်စက်, တီဗီအင်တင်နာ၊ RF ပေါင်းစပ်ကိရိယာ စသည်တို့သည် ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင့်အား လုပ်ပုံလုပ်နည်း သို့မဟုတ် ပြဿနာအမျိုးမျိုးအတွက် ကူညီပေးနိုင်သည့် အကောင်းဆုံး FM နည်းပညာအဖွဲ့ ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်များလည်း ရှိပါသည်။ ရုပ်မြင်သံကြား အသံလွှင့်စက်များ ရောင်းရန်ရှိသည်။၎င်းတို့အားလုံးသည် အကောင်းဆုံး ထုတ်လွှင့်မှု အရည်အသွေး ဖြစ်သည်၊ ဥပမာ၊ FMUSER ထုတ်လွှင့်မှု ဖြေရှင်းချက်အားလုံးသည် မတူညီသော တီဗီဌာနများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန်အတွက်၊ ကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် ထုတ်လွှင့်မှုဖြေရှင်းချက်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပါစေ၊ FMUSER သည် အမြဲတမ်း အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
FMUSER transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၏စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ရန်၊ သင့်အီးမေးလ်ကို ချန်ထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ စာတိုပေးပို့ပါ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။ 24/7 အွန်လိုင်း သင်၏ မက်ဆေ့ချ်/အီးမေးလ်/ခေါ်ဆိုမှုအား အမြန်ဆုံး အကြောင်းပြန်ပါမည်။
မှန်ကန်သော RF ပေါင်းစပ်မှုစနစ်ကို မည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း။
ယခင်အပိုင်းကတော့ 20kW UHF Combiner အသုံးပြုခြင်းအတွက် အကြံပြုချက် | ကြိုးခုန်
နောက်အပိုင်းကတော့ အဘယ်ကြောင့် UHF Combiner လိုအပ်သနည်း။ | ကြိုးခုန်
ဖောက်သည်တော်တော်များများက ငါတို့ဆီလာပြီး “ဟေ့၊ ဘယ်အမျိုးအစားလဲ။ UHF TV ပေါင်းစပ်စက်များ ရောင်းရန်ရှိသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးတွေလား။ FMUSER UHF/VHF ပေါင်းစည်းခြင်းအတွက် စျေးနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲ။"၊ အောက်ပါ အကြောင်းအရာများသည် သင့်အသံလွှင့်ဌာနအတွက် အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်စနစ်ကို မည်သို့ရွေးချယ်ရမည်အကြောင်း ဖြစ်သည်။
မှတ်စု: တကယ်တော့၊ ဒါက စီးပွားဖြစ်လျှို့ဝှက်ချက်ပါ၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီအကောင်းဆုံး transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာတွေအကြောင်း တခြားသူကို မပြောပါနဲ့ :)
ဒါဆို အကောင်းဆုံး RF ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။ FMUSER နည်းပညာအဖွဲ့မှ အကြံပြုချက်-
ကြေးနီ၊ ငွေရောင် ကြေးဝါနှင့် အရည်အသွေးမြင့် အလူမီနီယံ အလွိုင်းသည် ပိုကောင်းသည်။
Internal Structure ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုပါသေးတယ်။
Copper၊ ငွေရောင် ကြေးဝါနှင့် အရည်အသွေးမြင့် အလူမီနီယံ အလွိုင်းသည် ပိုကောင်းသည်။
သူငယ်ချင်းတို့၊ FM ရေဒီယိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တီဗီလိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မင်းရဲ့အသံလွှင့်ဌာနရဲ့ ရေရှည်လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ရင်၊ ထူးဆန်းတဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အလုပ်စတဲ့နေ့မှာ အဲဒါကို အလုပ်မလုပ်စေချင်ဘူး။
စဉ်းစားကြည့်ပါ၊ ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ကျပြီး အချိန်များစွာကုန်သော်လည်း စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် လေးလံသောစက်ကို မည်သူမျှ မလိုချင်ကြပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ကြေးနီ၊ ငွေရောင်ချထားသော ကြေးဝါနှင့် အရည်အသွေးမြင့် အလူမီနီယံသတ္တုစပ်ကဲ့သို့သော ပိုမိုကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို ရွေးချယ်နိုင်သည့်အခါ သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အချိန်မီပြုလုပ်သင့်ပြီး FMUSER မှ သင့်အား ဤအမျိုးအစားကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသံလွှင့်စက်များ။ ငါတို့မှာ မင်းလိုချင်တာ အကုန်ရှိတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာအဖွဲ့သည် "ဘုရားသခင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သူဌေးသည် အမည်မသိရေဒီယိုစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများထံမှ ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာဖြင့် ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာဖြင့် 2-way ပေါင်းစပ်စက်ကို ဝယ်ယူလိုက်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ရေဒီယိုအစီအစဉ်၏ ပရိသတ်အရေအတွက်သည် ကျဆင်းသွားပါသည်။" ဒါမှမဟုတ် "ဒီညံ့ဖျင်းတဲ့ပေါင်းစပ်သူကို ငါ သည်းမခံနိုင်တော့ဘူး!" ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့အား "ဘာကြောင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရုပ်သံလိုင်း RF ပေါင်းစပ်မှုကို မရွေးချယ်ရသနည်း" ဟု စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် အကြံပြုပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ အသံလွှင့်ဌာနအများစုတွင် FM အသံလွှင့်စက်များ သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲ-စတိတ်တီဗီထုတ်လွှင့်မှုများစွာရှိသည်။ ယခုအချိန်တွင်၊ အဆိုပါ ညံ့ဖျင်းသော ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်သူများသည် ခေတ်မီ လိုင်းပေါင်းစုံ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လွှင့်မှု၏ လိုအပ်ချက်များကို မဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါ။ ပိုကောင်းတဲ့ စက်ကိရိယာတွေ လိုအပ်တယ်။ FMUSER သည် သင်စျေးကွက်တွင်ရှာဖွေနိုင်သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် multi-channel RF ပေါင်းစပ်ကိရိယာများအားလုံးကို အကျုံးဝင်စေပါသည်။ စကားပြောရအောင်၊ အကောင်းဆုံးကို သေချာပေါက် ရှာတွေ့မှာပါ။
တတ်နိုင်သလောက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကို ပရိသတ်ကို ခံစားခွင့်မပေးပါနဲ့။ သင့်ပရိသတ်များသည် ပြင်းထန်သောဆူညံသံများအပြည့်ဖြင့် ထိုရေဒီယိုအစီအစဉ်များကို နားထောင်လိုစိတ်ရှိပါသလား။ အဆုံးစွန်သော ရေဒီယိုအစီအစဉ်အရည်အသွေးရှိစေရန် မည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်ဟာ မြို့ငယ်လေးက ရေဒီယို အသံလွှင့်ဌာန ဒါမှမဟုတ် အမျိုးသား တီဗီဌာန ဖြစ်ပါစေ၊ မင်းရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပရိသတ်ကို မဆုံးရှုံးစေချင်ပါဘူး။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ သင်သည် အလွန်နိမ့်သော ပုံပျက်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းခြင်း ဆုံးရှုံးမှုနှင့် FMUSER မှ VSWR၊ RF ပေါင်းထည့်မှု နည်းပါးသော ဘက်စုံသုံး ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာန စက်ကိရိယာများကို ရရှိနိုင်သောအခါတွင် သင်သည် သင်၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသံလွှင့်ကိရိယာကို အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် စတင်နိုင်သည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ မင်းနဲ့မင်းရဲ့ပရိသတ်တွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရလို့ ငါတို့ အရမ်းဂုဏ်ယူတယ်။
ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအခန်း၏ စုစုပေါင်းဧရိယာသည် အသံလွှင့်စတူဒီယိုကဲ့သို့ ကျယ်မည်မဟုတ်ပေ၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကက်ဘိနက်အမျိုးအစား အသံလွှင့်ထုတ်လွှင့်စက်များ၊ feeders၊ waveguide inflator စသည်တို့ကဲ့သို့သော လိုအပ်သော ရုပ်သံလွှင့်ကိရိယာများ အများအပြားရှိပါသည်။ သင်၏နည်းပညာအဖွဲ့သည် အဆိုပါစျေးကြီးသောစက်ပစ္စည်းများ၏လုပ်ငန်းကိုမထိခိုက်စေဘဲပေါင်းစပ်ကိရိယာအတွက်တည်နေရာကိုသင့်လျော်စွာစီစဉ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အများအားဖြင့်ပေါင်းစပ်ကိရိယာသည် rack ခန်းထဲသို့ဝင်ရန်အလွန်ကြီးနေနိုင်ပြီး၊ ကျစ်လစ်သောဒီဇိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ RF ပေါင်းစည်းရခြင်း၏အရေးကြီးသောအကြောင်းရင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြသည်။ အကြီးစားနှင့် အလတ်စား အသံလွှင့်ဌာနများတွင် လူကြိုက်များဆဲဖြစ်သည်။
ဘယ်လို အသံလွှင့်ကိရိယာမျိုးက အကောင်းဆုံး အသံလွှင့်စက်လို့ ခေါ်နိုင်မလဲ။ ဒါက စဉ်းစားသင့်တဲ့ မေးခွန်းပါ။ ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို နမူနာအဖြစ် ယူပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ရောင်းချနေသော ကျွန်ုပ်တို့၏ RF ပေါင်းစပ်ကိရိယာများ၏ ရာနှင့်ချီသော အရောင်းအပြီးတုံ့ပြန်ချက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် အကြောင်းအရာအချို့ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်- ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ ထက်ဝက်ကျော်သည် စုံစမ်းမေးမြန်းမှုပြုလုပ်သောအခါ ပထမအကြိမ်တွင် စျေးနှုန်းနှင့် အသွင်အပြင်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိကြောင်း တိုင်ကြားခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ သာမန်လူများ ဂရုမစိုက်နိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အချို့ကြောင့် ၎င်းတို့အား ဆွဲဆောင်ခံရသည်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဘီနင်မှ Charles သည် သူ၏မြူနီစပါယ်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လွှင့်မှုအလှည့်ကျဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအပေါ် များစွာစိတ်ဝင်စားကြောင်းပြသသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ့အား စိတ်ကြိုက်အစုံအလင်ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ 20kw TV transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာ လေးပေါက်နှင့်။ ဤမော်ဒယ်၏အကြီးမားဆုံးအင်္ဂါရပ်မှာ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အဆင်ပြေသောကြိမ်နှုန်းပေါင်းများစွာပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ Charles ရဲ့ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနက အဲဒီဒေသမှာ အကျော်ကြားဆုံးတွေထဲက တစ်ခုပါ။ 20kw UHF TV ပေါင်းစပ်ကိရိယာ Charles နှင့် သူ၏ပရိသတ်များကို 2013 ခုနှစ်ကတည်းက ဝန်ဆောင်မှုပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါသည်၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ RF ပေါင်းစည်းသူများ၏ အကောင်းဆုံးရောင်းချပြီးနောက်တုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းစပ်ကိရိယာသည် အပူချိန်အနည်းငယ်မြင့်တက်ခြင်း၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မလိုအပ်တော့သော ပါဝါစွမ်းရည်ဒီဇိုင်း၊ ပါဝါပေါင်းစပ်မှုစသည်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသံလွှင့်ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ရန် စွမ်းရည်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိကြောင်း အခြားဖောက်သည်အများအပြားက အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် အကောင်းဆုံး လိုင်းပေါင်းစုံရှိသည်။ UHF/VHF TV ပေါင်းစပ်ကိရိယာများ ရောင်းရန်ရှိသည်။FMUSER မှ 1kW မှ 40kW အထိ ပါဝါရှိသော TV ပေါင်းစပ်ကိရိယာများကို ဝယ်ယူပါ။
အတိအကျအားဖြင့် ၎င်းတို့ကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားထားသည်။
Vhf Cib Combiners
Vhf Digital Cib Combiners
Vhf Starpoint ပေါင်းစည်းသူများ
Uhf Atv Cib Combiners
Uhf Dtv Cib Combiners
Uhf Stretchline Combiners
Uhf Dtv Starpoint Combiners
Uhf Atv Starpoint Combiners
Uhf Digital Cib Combiner - Cabinet အမျိုးအစား
L - Band Digital 3-channel Combiners
ဤပေါင်းစပ်ကိရိယာများသည် 1 kW၊3kW၊4kW၊6kW၊ 8 kW၊ 8/20 kW၊ 10 kW၊ 15 kW၊ 20kW၊ 15/20 kW၊ 24 kW၊ 25kW၊ 40 kW VHF/H နှင့် TV ပေါင်းစပ်မှုများ ချန်နယ် 3၊4သို့မဟုတ် dual-mode waveguide filters များ ၊ ၎င်းတို့ကို FM branched combiners များဟုလည်းလူသိများကြပြီး အချို့မှာ solid-state type သို့မဟုတ် cabinet type combiner များဖြစ်ပြီး အချို့မှာ L-band digital အမျိုးအစားပေါင်းစပ်သူများဖြစ်သည်၊ သူတို့က UHF CIB ပေါင်းစပ်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် UHF ကြယ်အမျိုးအစား (သို့မဟုတ် ကြယ်ပွိုင့်) ပေါင်းစပ်ကိရိယာများ၊ ကြိမ်နှုန်း 167 - 223 MHz၊ 470 - 862 MHz၊ 1452 - 1492 MHz
ငါတို့မှာလည်း အကောင်းဆုံးတွေရှိတယ်။ လိုင်းပေါင်းစုံ FM ပေါင်းစပ်ကိရိယာများ ရောင်းရန်ရှိသည်။FMUSER မှ 4kW မှ 120kW အထိ ပါဝါရှိသော transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာများကို ဝယ်ယူပါ။ အတိအကျအားဖြင့် ၎င်းတို့သည်4kW၊ 15 kW၊ 40 kW၊ 50 kW၊ 70 kW၊ 120 kW FM CIB လိုင်းများ3သို့မဟုတ်4လိုင်း၊ ရရှိနိုင်သော FM CIB ပေါင်းစည်းသူများ၊ FMUSER မှ ချန်နယ်များစွာဖြင့် ကြိမ်နှုန်း 87 -108MHz၊ ကောင်းစွာ၊ FM balanced ပေါင်းစပ်မှုများဟုလည်း လူသိများကြပြီး ၎င်းနှင့် လုံးဝကွဲပြားသည်။ ကြယ်အမျိုးအစားပေါင်းစပ်စက်များရောင်းရန်ရှိသည်။; Balanced ပေါင်းစပ်မှုများမှလွဲ၍ Starpoint ပေါင်းစပ်ကိရိယာများသည် 1kW မှ 10kW အထိပါဝါ 1kW မှ 3kW အကြား အရောင်းရဆုံးဖြစ်သည့် Starpoint ပေါင်းစပ်သူများဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့သည် 6kW၊ 10kW၊ 3kW၊ 4kW FM Starpoint ပေါင်းစည်းသည့် 6၊ 87 သို့မဟုတ် 108 ချန်နယ်များဖြစ်သည်။ , နှင့် XNUMX -XNUMXMHz ရှိသော ကြိမ်နှုန်း၊ ဤပေါင်းစပ်ကိရိယာအမျိုးအစားများကို ကြယ်အမျိုးအစားပေါင်းစည်းသူများဟုလည်း ခေါ်သည်။
ဤသည်မှာ နှစ်များအတွင်း အလွန်ကောင်းမွန်သော ရောင်းချပြီးနောက် တုံ့ပြန်ချက်ဖြင့် ရရှိနိုင်သော transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာများအကြောင်း အသုံးဝင်သော အချက်အလက်အချို့ဖြစ်သည်၊ သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သည်-
ဇယား A IPC4kW Transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာများ စျေးနှုန်း
နောက်တစ်ခုက FM Balanced Combiner ရောင်းမည် | ကြိုးခုန်
အမြိုးခှဲခွားခွငျး ပုံစံ စွမ်းအား မင်း ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး Narrow Band ထည့်သွင်းခြင်း။ မက်စ်။ input ပါဝါ WideBand ထည့်သွင်းခြင်း။ မက်စ်။ input ပါဝါ ချန်နယ်/အပေါက် နောက်ထပ်လေ့လာရန်
FM A ၁၀.၅၂ kW 1.5 MHz ၁၀.၅၂ kW ၁၀.၅၂ kW3နောက်ထပ်
FM A1 ၁၀.၅၂ kW 1 MHz * ၁၀.၅၂ kW ၁၀.၅၂ kW 4
FM B ၁၀.၅၂ kW 1.5 MHz3kW **4kW **3နောက်ထပ်
FM B1 ၁၀.၅၂ kW 0.5 MHz*3kW **4kW ** 4
* 1 MHz ထက်နည်းသော ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးရှိသော ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
** NB နှင့် WB input power ၏ပေါင်းလဒ်သည်4kW ထက်နည်းသင့်သည်။
Chart B. High Power FM CIB (ဟန်ချက်ညီသောအမျိုးအစား) Combiner ရောင်းမည်
ယခင် ဟူသည် ၁၁ ကီလိုဝပ် High Power Transmitter Combiner စျေးနှုန်း | ကြိုးခုန်
နောက်တစ်ခုက FM Starpoint ပေါင်းစပ် ရောင်းမည် | ကြိုးခုန်
အမြိုးခှဲခွားခွငျး စွမ်းအား ပုံစံ
မင်း ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး Narrow Band ထည့်သွင်းခြင်း။ မက်စ်။ input ပါဝါ WideBand ထည့်သွင်းခြင်း။ မက်စ်။ input ပါဝါ နောက်ထပ်လေ့လာရန်
A31.5 MHz ၁၀.၅၂ kW ၁၀.၅၂ kW နောက်ထပ်
4 1 MHz * ၁၀.၅၂ kW ၁၀.၅၂ kW
B31.5 MHz3kW **4kW ** နောက်ထပ်
B140.5 MHz*3kW **4kW **
A31.5 MHz
Narrow Band ထည့်သွင်းခြင်း။
6 kW **
15 kW **
A140.5 MHz*
B31.5 MHz
10 kW **
B140.5 MHz*
၁၀.၅၂ kW WideBand ထည့်သွင်းခြင်း။
၁၀.၅၂ kW နောက်ထပ်
၁၀.၅၂ kW ၁၀.၅၂ kW
3 1.5 MHz
20 kW **
50 kW **
4 0.5 MHz*
70 kW/120kW A31.5 MHz*
30 kW **
70 kW ** နောက်ထပ်
A131.5 MHz*
120 kW **
ဇယား C. စွမ်းအားမြင့် FM Starpoint ပေါင်းစပ် စျေးနှုန်း
ယခင် ဟူသည် IPC FM Combiner ရောင်းမည် | ကြိုးခုန်
နောက်တစ်ခုက Solid-State N-Channel Transmitter Combiner စျေးနှုန်း | ကြိုးခုန်
connectors မင်း ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး မက်စ်။ input ပါဝါ နောက်ထပ်လေ့လာရန်
FM ၁၀.၅၂ kW A37-16 DIN
3 MHz2x 500 ဒဗလျူ နောက်ထပ်
FM ၁၀.၅၂ kW A1
4 7-16 DIN
1.5 MHz2x 500 ဒဗလျူ
3 MHz2x 1.5 kW နောက်ထပ်
FM ၁၀.၅၂ kW A147-16 DIN
1.5 MHz2x 1.5 kW
၁၀.၅၂ kW A315/ 8 "
A1415/ 8 "
A315/ 8 "
2 x5kW
FM ၁၀.၅၂ kW
A33 1 / 8 "
2 x 10 kW နောက်ထပ်
A143 1 / 8 "
2 x 10 kW
Chart D. Solid-State N-Channel Transmitter Combiner
ယခင် ဟူသည် FM Star Type Combiner ရောင်းမည် | ကြိုးခုန်
နောက်တစ်ခုက UHF/VHF Balanced Combiner ရောင်းမည် | ကြိုးခုန်
အမြိုးခှဲခွားခွငျး စွမ်းအား ချန်နယ်/အပေါက်
FM ၁၀.၅၂ kW215/ 8 "
3 MHz N x 1 W (N<5) နောက်ထပ်
ဇယား E. စွမ်းအားမြင့် IPC လှိုင်းနှုန်းသည် UHF / VHF ပေါင်းစပ် ရောင်းမည်
ယခင် ဟူသည် Solid-State N-Channel Transmitter ပေါင်းစပ်စက် | ကြိုးခုန်
နောက်တစ်ခုက VHF Branched Combiner စျေးနှုန်း | ကြိုးခုန်
မင်း ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး Narrow Band ထည့်သွင်းခြင်း။
မက်စ်။ input ပါဝါ WideBand ထည့်သွင်းခြင်း။
မက်စ်။ input ပါဝါ နောက်ထပ်လေ့လာရန်
VHF ၁၀.၅၂ kW A32 MHz6kW * 15 kW * နောက်ထပ်
VHF ၁၀.၅၂ kW A1
4 1 MHz6kW * 15 kW *
VHF ၁၀.၅၂ kW B32 MHz 10 kW * 15 kW * နောက်ထပ်
VHF ၁၀.၅၂ kW B141 MHz 10 kW * 15 kW *
VHF ၁၀.၅၂ kW
N / A60 MHz
VHF ၁၀.၅၂ kW A32 MHz
VHF ၁၀.၅၂ kW A141 MHz
Chart F. စွမ်းအားမြင့် VHF Starpoint ပေါင်းစပ်သူ စျေးနှုန်း
ယခင် ဟူသည် လှိုင်းနှုန်းသည် UHF / VHF ချိန်ခွင်လျှာ ပေါင်းစပ် ရောင်းမည် | ကြိုးခုန်
နောက်တစ်ခုက UHF ATV Balanced Combiner ရောင်းမည် | ကြိုးခုန်
ရှုထောင့် မင်း ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး မက်။ ထည့်သွင်းပါဝါ သွင်းအားစုများအကြား သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်း။ စိတ်ဝင်စားလို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။
VHF ၁၀.၅၂ kW A4× 650 410 680 မီလီမီတာ×
2 MHz2x 1.5 kW ≥ 40 dB နောက်ထပ်
6 × 990 340 670 မီလီမီတာ×
1 MHz2x 1.5 kW ≥ 55 dB
VHF ၁၀.၅၂ kW A4L × 930 × H mm *
2 MHz2x3kW ≥ 40 dB နောက်ထပ်
VHF ၁၀.၅၂ kW A16L × 705 × H mm *
1 MHz2x3kW ≥ 50 dB
A3L × 880 × H mm *
≥ 45 dB
VHF ၁၀.၅၂ kW A14L × 1145 × H mm *
≥ 40 dB
* L နှင့် H သည် ချန်နယ်များပေါ်တွင် မူတည်သည်။
ဇယား G စွမ်းအားမြင့် UHF ATV CIB Combiner ရောင်းမည်
ယခင် ဟူသည် VHF Starpoint Combiner ရောင်းရန်ရှိသည်။ | ကြိုးခုန်
နောက်တစ်ခုက UHF DTV Balanced Combiner စျေးနှုန်း | ကြိုးခုန်
မင်း ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး ကြိုးဝိုင်းထည့်သွင်းခြင်း။
မက်။ ထည့်သွင်းပါဝါ Wideband ထည့်သွင်းခြင်း။
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ၁၀.၅၂ kW A41 MHz2kW * 8 kW * နောက်ထပ်
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ၁၀.၅၂ kW B41 MHz5kW * 8 kW *
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ၁၀.၅၂ kW A41 MHz 20 kW * 25 kW *
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ၁၀.၅၂ kW A161 MHz 20 kW * 25 kW *
* NB နှင့် WB input power ၏ပေါင်းလဒ်သည် 8 kW ထက်နည်းသင့်သည်။
ဇယား H စွမ်းအားမြင့် UHF DTV CIB Combiner ရောင်းမည်
ယခင် ဟူသည် UHF ATV Balanced Combiner ရောင်းရန်ရှိသည်။ | ကြိုးခုန်
နောက်တစ်ခုက Solid-State UHF ဒစ်ဂျစ်တယ် ဟန်ချက်ညီ ပေါင်းစပ်စျေးနှုန်း | ကြိုးခုန်
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ၁၀.၅၂ kW A60 MHz 0.7 kW RMS * 1 kW RMS * နောက်ထပ်
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ၁၀.၅၂ kW B60 MHz 1.5 kW RMS *6kW RMS *
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ၁၀.၅၂ kW A60 MHz3kW RMS *6kW RMS *
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ၁၀.၅၂ kW A60 MHz3kW RMS * 16 kW RMS *
B60 MHz
6 kW RMS *
16 kW RMS *
A60 MHz6kW RMS *
25 kW RMS *
Chart I. Solid-State UHF Digital Balance Combiner
ယခင် ဟူသည် UHF DTV Balance Combiner စျေးနှုန်း | ကြိုးခုန်
နောက်တစ်ခုက UHF DTV Star Type Combiner ရောင်းရန်ရှိသည်။ | ကြိုးခုန်
မက်စ်။ input ပါဝါ
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ၁၀.၅၂ kW60 MHz 0.7 kW RMS * 1 kW RMS *
* NB နှင့် WB input power ၏ပေါင်းလဒ်သည် 1 kW ထက်နည်းသင့်သည်။
J. High Power UHF ဇယား DTV Starpoint Combiner ရောင်းမည်
ယခင် ဟူသည် Solid-State UHF ဒစ်ဂျစ်တယ် CIB Combiner | ကြိုးခုန်
နောက်တစ်ခုက UHF ATV Starpoint Combiner စျေးနှုန်း | ကြိုးခုန်
ရှုထောင့် မင်း ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး မက်။ ထည့်သွင်းပါဝါ connectors အလေးချိန်
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF A6× 600 200 300 မီလီမီတာ×
1 MHz2x 350 ဒဗလျူ 7-16 DIN ~ 15 ကီလိုဂရမ်
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF B
6 × 800 350 550 မီလီမီတာ×
1 MHz2x 750 ဒဗလျူ 15/ 8 " ~ 38 ကီလိုဂရမ်
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF C6× 815 400 750 မီလီမီတာ×
1 MHz2x 1.6 kW 15/ 8 " ~ 57 ကီလိုဂရမ်
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF D6× 1200 500 1000 မီလီမီတာ×
1 MHz2x3kW 1 5/8",31/8" ~ 95 ကီလိုဂရမ်
ဇယား K. စွမ်းအားမြင့် UHF ATV Starpoint Combiner စျေးနှုန်း
ယခင် ဟူသည် UHF DTV Starpoint Combiner ရောင်းရန်ရှိသည်။ | ကြိုးခုန်
နောက်တစ်ခုက UHF Stretchline Combiner ရောင်းရန်ရှိသည်။ | ကြိုးခုန်
ရှုထောင့် မင်း ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး မက်။ ထည့်သွင်းပါဝါ connectors အလေးချိန် နောက်ထပ်လေ့လာရန်
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ၁၀.၅၂ kW A4ချန်နယ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
2 MHz2x 10 kW31 / 8 " ~ 45 - 110 ကီလိုဂရမ်
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ၁၀.၅၂ kW B4ချန်နယ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
2 MHz 10 kW / 5kW31 / 8 " ~ 65 - 90 ကီလိုဂရမ်
ဇယား L. စွမ်းအားမြင့် UHF Stretchline Combiner ရောင်းမည်
ယခင် ဟူသည် UHF ATV Starpoint Combiner စျေးနှုန်း | ကြိုးခုန်
နောက်တစ်ခုက စွမ်းအားမြင့် L-band ဒစ်ဂျစ်တယ် 3-Channel ပေါင်းစပ်စက် | ကြိုးခုန်
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF 8 A ≤0.2 dB 550 × 110 × H mm*၊
5 MHz2x4kW 15/ 8 " ချန်နယ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF 20 B ≤0.1 dB 720 × 580 × H mm*၊
5 MHz2x 10 kW31 / 8 " ချန်နယ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
* H သည် ချန်နယ်များပေါ်တွင် မူတည်သည်။
Chart M. High Power L-band Digital 3-Channel Combiner
ယခင် ဟူသည် UHF ATV Starpoint Combiner ရောင်းရန်ရှိသည်။ | ကြိုးခုန်
နောက်သို့ ဇယား A4kW Transmitter Combiners စျေးနှုန်း | ကြိုးခုန်
မင်း ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး မက်စ်။ input ပါဝါ
အလေးချိန် ရှုထောင့် နောက်ထပ်လေ့လာရန်
တိုးတက်သော CIB ၁၀.၅၂ kW61 MHz3x 1.3 kW
≥ 60 dB
~ 90 ကီလိုဂရမ်
× 995 710 528 မီလီမီတာ×
၎င်းကိုပြန်လည်ယူဆောင်ကြပါစို့၊ အသုံးပြုမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ သက်ဆိုင်ရာအကွေးအကွေးများနှင့်ကြေးနီပိုက်များ၏အဆစ်များနှင့် plug cores များကိုအမြဲအာရုံစိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခြင်းနှင့် ရေဒီယိုစင်ခန်း၏တုန်ခါမှုကြောင့် ဤအရာများ လျော့ရဲသွားနိုင်သည်။
အထူးသဖြင့် တန်ဖိုးကြီးသော တီဗီထုတ်လွှင့်သည့် ပစ္စည်းအချို့အတွက် သင်တာဝန်ယူသည့်အခါ၊ ဥပမာ၊ ပါဝါမြင့်မားသော UHF ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၊ လိုအပ်သည်-
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းကို ပုံမှန်၊ ရက်/ပတ်/လ စသဖြင့် လုပ်ပါ။
ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေတစ်ခုဖန်တီးခြင်းသည် ဘေးကင်းပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားမှုအတွက် အရေးကြီးသောအာမခံချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အနားစောင်းကွေးနှင့် ကြေးပိုက်အဆစ်တစ်ခုစီ၏ အပူချိန်ကို အာရုံစိုက်ပါ။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းသည် စေ့စေ့စပ်စပ်ဖြစ်သင့်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ရှေ့ဆုံးထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်၏ အကောင်းဆုံးထုတ်လွှင့်မှုအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကို စဉ်ဆက်မပြတ်မြှင့်တင်နိုင်စေရန် ထိန်းသိမ်းမှုမှတ်တမ်းများနှင့် အကျဉ်းချုပ်များပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သတိရပါ။
ထိတွေ့မှုမကောင်းသောအခါတွင် အပူချိန်သည် လျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာသည်။ ထိုသို့သောပြဿနာမျိုးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို အချိန်မီဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အနားစောင်းထားထားသော ကွေးကို အစားထိုးရန် သို့မဟုတ် ပလပ်ကို အစားထိုးရန်၊
▲ UHF Combiner အသုံးပြုခြင်းအတွက် အကြံပြုချက် ▲
သင်သည် 20kW UHF ATV Starpoint Combiner ယခင်ကထက် ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။
ယခင်အပိုင်းကတော့ Broadcast Station အတွက် RF Combiner ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။ | ကြိုးခုန်
နောက်တစ်ခုက ဘာဖြစ်သလဲ FM Star Point Combiner | ကြိုးခုန်
RF Combiner ဆိုတာ ဘာလဲ။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် RF ပေါင်းစပ်ကိရိယာသည် ဂီယာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပါဝါပေါက်နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုသော port များကြားတွင် ပါဝါကို ပေါင်းစပ်ထားပြီး ၎င်းတို့ကို အင်တာနာတစ်ခုထက်ပိုသော ရေဒီယိုတစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် အသုံးအများဆုံးဖြစ်သည်။ တူညီသောကြိမ်နှုန်းကို အသုံးပြု၍ အင်တင်နာတစ်ခုတည်းသို့ ရေဒီယိုများစွာကို ချိတ်ဆက်ရန် RF ပေါင်းစပ်မှုများကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
ရုပ်သံလွှင့်ဌာနများသည် များစွာသော FM ထုတ်လွှင့်မှု အချက်ပြမှုများကို ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာ (AKA- FM ကြယ်ပွင့်အမှတ်ပေါင်းစပ်ကိရိယာများ သို့မဟုတ် FM မျှတသောပေါင်းစပ်ကိရိယာများ)သို့မဟုတ် TV အချက်ပြမှုများကို ရောနှောပါ။ UHF/VHF ပေါင်းစပ်မှုများ (AKA: UHF VHF Starpoint ပေါင်းစပ်မှုများ သို့မဟုတ် ဟန်ချက်ညီသောပေါင်းစပ်မှုများ) ပရိသတ်သည် တစ်ချိန်တည်းတွင် အသံလွှင့်အစီအစဉ်များစွာကို နားထောင်နိုင်သည်။ ဘရော့ဒ်ဘန်းအင်တင်နာစနစ်တစ်ခုမှ ကြိမ်နှုန်းအများအပြားကို ထုတ်လွှင့်ရာတွင် RF စစ်ထုတ်မှုများနှင့် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသော ထုတ်လွှင့်လိုင်းများပါရှိသော ပေါင်းစပ်စနစ် သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ Multi-channel ပေါင်းစပ်ကိရိယာ နှစ်မျိုးရှိပြီး၊ FM ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် တီဗီပေါင်းစပ်ကိရိယာ နှစ်မျိုးရှိပြီး ၎င်းတို့သည် သီးခြားအသုံးပြုမှုအရ ကွဲပြားသည်-
FM Combiner - FM Branched Combiner (Star Point Combiner)/FM Balanced Combiner (CIB-Constant Impedance Combiner)
TV Combiner - UHF/VHF Combiner (UHF/VHF မျှတသောပေါင်းစပ်ကိရိယာနှင့် အကိုင်းအခက်ပေါင်းစပ်ကိရိယာ)
ဘာကြောင့် RF Combiner ဖြစ်တာလဲ။ အရမ်းအရေးကြီးလား?
အင်တင်နာတာဝါတိုင်များ၏ အရင်းအမြစ်ပြတ်လပ်မှုပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် FM နှင့် TV လိုင်းပေါင်းစုံအတွက် မျှဝေမျှော်စင်နည်းပညာကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ နည်းပညာတွေပြောင်းလဲလာပြီး အီလက်ထရွန်းနစ်ဆက်သွယ်ရေးဟာ နေ့စဉ်ဘဝရဲ့ မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီး FMUSER မှာ ဒီအချက်တွေကို အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် နောက်ကြောင်းပြန်တုံ့ပြန်မှုသာမက ပေါ်ပေါက်လာသောနည်းပညာများနှင့်ပါ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် RF ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို အမြဲတမ်းရှာဖွေနိုင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ RF ပေါင်းစပ်ရွေးချယ်စရာများကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် နည်းလမ်းအသစ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ် ရှာဖွေဖော်ထုတ်လျက်ရှိပါသည်။
FMUSER သည် ကျယ်ပြန့်သော ရုပ်သံလိုင်းပေါင်းများစွာကို ပေးဆောင်သည်။ duplexers နှင့် triplexers ရောင်းရန်ရှိသည်။ analog နှင့် HD ရေဒီယို ဒစ်ဂျစ်တယ် FM အချက်ပြမှုများကို ပေါင်းစပ်ရန်။ ဤထုတ်ကုန်များတွင် 10 dB Hybrid Injectors၊ Reverse Fed Constant Impedance ပါဝင်သည်။ FM ပေါင်းစပ်သူများနှင့် VHF/UHF TV Combiner နှင့် High-Efficiency Diplexer ။
သင့်အသံလွှင့်ဌာနအတွက် စွမ်းအားမြင့် UHF Balanced Combiner ကို ဘာကြောင့် လိုအပ်တာလဲ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ နိုင်ငံနှင့် ဒေသအများအပြားရှိ ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားဌာနများသည် FM လိုင်းများနှင့် တီဗီချန်နယ်များကို ထည့်သွင်းလာကြသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်အရ၊ multi-channel shared tower transmitting broadcasting ကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် multi-channel transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို အသုံးပြုရန် မလွဲမသွေ ရွေးချယ်မှုဖြစ်သင့်ပါသည်။
ယူခြင်း4လိုင်းများ transmitter ကို ပေါင်းစပ်ကိရိယာ ဥပမာအနေဖြင့်၊ ရောနှောထားသော RF ကိရိယာသည် မတူညီသော ကြိမ်နှုန်းများကို ထုတ်လွှတ်သည့် အချက်ပြလှိုင်းများကို မျှဝေခြင်းဖြင့် ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။ transmitter အင်တင်နာဆိုလိုသည်မှာ အဆိုပါ အသံလွှင့်ကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အဆိုပါ အသံလွှင့်ဌာနများသည် FM သို့မဟုတ် TV ထုတ်လွှင့်သည့် အင်တင်နာ ဆယ်ခုကို အသုံးပြုမည့်အစား ONE transmitter ပေါင်းစပ်မှုမှတစ်ဆင့် အချက်ပြအများအပြားကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။
ပိုမိုတိကျစေရန်အတွက် ရုပ်သံလိုင်းကောင်းတစ်ခုရှိခြင်း၏ အရေးပါမှုကို အတိုချုံးရှင်းပြရန် အောက်ပါအကြောင်းရင်း5ခုရှိပါသည်။ FM/TV အသံလွှင့်ဌာနအတွက် ပေါင်းစပ်ကိရိယာ:
မျှဝေမျှော်စင်နည်းပညာ၏ အဓိကသော့ချက်မှာ ရုပ်သံလိုင်းပေါင်းစုံပေါင်းစပ်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ကောင်းသော FM/UHF/VHF ပေါင်းစပ်ကိရိယာသည် အချက်ပြထုတ်လွှင့်မှုစနစ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုက်ရိုက်တိုးတက်စေနိုင်သည်။
ထို့အပြင်၊ ကောင်းမွန်သော FM/UHF/VHF ပေါင်းစပ်ကိရိယာသည် များစွာသော အင်တာနာများ တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေနိုင်ပြီး၊ အထူးသဖြင့် အချို့မြို့ပြထုတ်လွှင့်ရေးဌာနများတွင် RF ထုတ်လွှင့်သည့်စက်ပစ္စည်းများ၏ ဝယ်ယူမှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချခြင်းသည် FM/TV station ၏လည်ပတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ .
ထို့အပြင် တာဝါတိုင်တစ်ခုသည် TV ထုတ်လွှင့်ခြင်းအင်တင်နာများနှင့် FM ထုတ်လွှင့်မှုအင်တာနာများစွာကို တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် မျှော်စင်ပေါ်ရှိ ရနိုင်သော အမြင့်မှာ အလွန်အကန့်အသတ်ရှိသည်။
FM အင်တင်နာတာဝါအတွက် ယေဘူယျအားဖြင့် တာဝါတိုင်ပေါ်တွင် FM အင်တာနာများ တပ်ဆင်ရန် ခွင့်ပြုထားသောကြောင့် ပရိသတ်အတွက် FM အစီအစဉ်များစွာကို တစ်ပြိုင်နက်ထုတ်လွှင့်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်သော transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် FM ထုတ်လွှင့်မှုအရည်အသွေးနှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည့် FM ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၏ အရည်အသွေးကို တိုင်းတာရာတွင် ကူညီရန်အတွက် ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၏ စံနည်းပညာဆိုင်ရာ အညွှန်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခု ရှိရန် အရေးကြီးပါသည်။
fmradiobroadcast.com တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် မှန်ကန်သော RF ပေါင်းစပ်ကိရိယာကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင့်တွင်ရှိနိုင်သည့်မေးခွန်းများကို ဖြေကြားရန် အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများရှိပါသည်။ fmradiobroadcast.com သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် +86 - 139 - 22702227 သို့ ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် အချိန်မရွေး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမြဲတမ်းအလိုလားဆုံး RF ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
အသံလွှင့်ဌာနအတွက် UHF TV Transmitter Combiner ကို ဝယ်မလား။ ဤနေရာသည် မှန်ကန်သောနေရာဖြစ်သည်။
FMUSER သည် ထုတ်လုပ်သည့် အကောင်းဆုံး transmitter ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်သူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ UHF Starpoint ပေါင်းစပ်ကိရိယာများ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ နိုင်ငံများနှင့် ဒေသပေါင်း 200+ အနီးတွင် ရောင်းချရန်၊ ဤနေရာတွင် သင်သည် transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာများကို ဝယ်ယူနိုင်သည်-
အာဖဂန်နစ္စတန်၊ အယ်လ်ဘေးနီးယား၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ အန်ဒိုရာ၊ အန်ဂိုလာ၊ အန်တီဂွာနှင့် ဘာဘူဒါ၊ အာဂျင်တီးနား၊ အာမေးနီးယား၊ ဩစတေးလျ၊ သြစတြီးယား၊ အဇာဘိုင်ဂျန်၊ ဘဟားမား၊ ဘာရိန်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဘာဘေးဒိုးစ်၊ ဘီလာရုစ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယမ်၊ ဘီလီဇ်၊ ဘီနင်၊ ဘူတန်၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ ဘော့စနီးယားနှင့် ဟာဇီဂိုဗီးနား၊ ဘရာဇီး၊ ဘရူနိုင်း၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ဘာကီနာဖာဆို၊ ဘူရွန်ဒီ၊ ကာဘိုဗာဒီ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ကင်မရွန်း၊ ကနေဒါ၊ ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ၊ ချဒ်၊ ချီလီ၊ တရုတ်၊ ကိုလံဘီယာ၊ ကိုမိုရော့စ်၊ ကွန်ဂို၊ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကွန်ဂို၊ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကော်စတာရီကာ ၊ Côte d'Ivoire၊ Croatia၊ Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, East Timor (Timor - Leste), Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Eswatini, Ethiopia၊ ဖီဂျီ၊ ဖင်လန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂါဘွန်၊ ဂမ်ဘီယာ၊ ဂျော်ဂျီယာ၊ ဂျာမနီ၊ ဂါနာ၊ ဂရိ၊ Grenada၊ ဂွာတီမာလာ၊ ဂီနီ၊ ဂီနီ - Bissau၊ Guyana၊ ဟေတီ၊ ဟွန်ဒူးရပ်စ်၊ ဟန်ဂေရီ၊ အိုက်စလန်၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ အီရန်၊ အီရတ်၊ အိုင်ယာလန်၊ အစ္စရေး အီတလီ၊ ဂျမေကာ၊ ဂျပန်၊ ဂျော်ဒန်၊ ကာဇက်စတန်၊ ကင်ညာ၊ ကီရီဘာတီ၊ ကိုရီးယား၊ မြောက်၊ ကိုရီးယား၊ တောင်၊ ကိုဆိုဗို၊ ကူဝ ait၊ ကာဂျစ္စတန်၊ လာအို၊ လတ်ဗီးယား၊ လက်ဘနွန်၊ လီဆိုသို၊ လိုက်ဘေးရီးယား၊ လစ်ဗျား၊ လစ်ချ်တင်စတိန်း၊ လစ်သူယေးနီးယား၊ လူဇင်ဘတ်၊ မဒါဂတ်စကာ၊ မာလာဝီ၊ မလေးရှား၊ မော်လဒိုက်၊ မာလီ၊ မော်လ်တာ၊ မာရှယ်ကျွန်းများ၊ မောရီတေးနီးယား၊ မောရစ်ရှပ်၊ မက္ကဆီကို၊ မိုက်ခရိုနီးရှား၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၊ Moldova မိုနာကို၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ မွန်တီနီဂရိုး၊ မော်ရိုကို၊ မိုဇမ်ဘစ်၊ မြန်မာ (မြန်မာ)၊ နမီးဘီးယား၊ နောရူ၊ နီပေါ၊ နယ်သာလန်၊ နယူးဇီလန်၊ နီကာရာဂွာ၊ နိုင်ဂျာ၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား၊ နော်ဝေး၊ အိုမန်၊ ပါကစ္စတန်၊ ပါလောင်၊ ပနားမား၊ ပါပူဝါနယူးဂီနီ၊ ပါရာဂွေး၊ ပီရူး၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ပိုလန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ကာတာ၊ ရိုမေးနီးယား၊ ရုရှား၊ Rwanda၊ Saint Kitts and Nevis၊ Saint Lucia၊ Saint Vincent and the Grenadines၊ Samoa၊ San Marino၊ Sao Tome and Principe၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ဆီနီဂေါ၊ ဆားဘီးယား၊ Seychelles ဆီယာရာလီယွန်၊ စင်ကာပူ၊ စလိုဗက်ကီးယား၊ စလိုဗေးနီးယား၊ ဆော်လမွန်ကျွန်းများ၊ ဆိုမာလီယာ၊ တောင်အာဖရိက၊ စပိန်၊ သီရိလင်္ကာ၊ ဆူဒန်၊ ဆူဒန်၊ တောင်၊ ဆူရီနမ်၊ ဆွီဒင်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဆီးရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ တာဂျစ်ကစ္စတန်၊ တန်ဇန်းနီးယား၊ ထိုင်း၊ တိုဂို၊ တွန်ဂါ၊ ထရီနီဒက် တိုဘာဂို၊ တူနီးရှား၊ တူရကီ၊ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်၊ တူဗာလူ၊ ယူဂန်ဒါ၊ ယူကရိန်း၊ United Ar ab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vatican City, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe
20kW UHF Starpoint Combiner ၏ အရေးကြီးသော လျှပ်စစ်အညွှန်းကိန်း
A 20kW UHF တီဗီထုတ်လွှင့်မှုပေါင်းစပ်ကိရိယာ FMUSER မှ RF ကို မတူညီသော အရင်းအမြစ်များစွာမှ ပေါင်းစပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ UHF ပေါင်းစပ်မှုများကို မတူညီသော အသုံးချပလီကေးရှင်းများစွာတွင် ရလဒ်အမျိုးမျိုးကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျယ်ပြန့်သော အသုံးဝင်မှုနှင့်အတူ၊ သင့်လိုအပ်ချက်အတွက် မှန်ကန်သော UHF TV ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို ရွေးချယ်သည့်အခါ ၎င်းသည် တုန်လှုပ်ဖွယ်အလုပ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ အခြေခံအားဖြင့် တစ်ခုရွေးတဲ့အခါ multi-channel transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာသော့စွမ်းဆောင်မှု ကန့်သတ်ချက်များ၊ ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု၊ ဆိပ်ကမ်းများအကြား အထီးကျန်မှု၊ ခွဲခြမ်းအချက်ပြမှုများ၏ အနီးနား၊ ခွဲခြမ်းအချက်ပြမှုများအတွက် အချက်ပြအဆင့်၏ နီးကပ်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။
သီးသန့်ထားခြင်း, ခွဲထားခြင်း: Isolation ဆိုသည်မှာ မတူညီသော ကြိမ်နှုန်းများစွာ၏ အချက်ပြမှုများစွာဆီသို့ စက်ပစ္စည်းများစွာ၏ သီးခြားခွဲထုတ်နိုင်စွမ်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ အထီးကျန်နိုင်မှု အားနည်းရင်။ အချက်ပြနှစ်ခုကြားတွင် ကြားခံစနစ်အား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် FM ထုတ်လွှင့်ခြင်း၏ အရည်အသွေးကို လျော့ကျစေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ အထီးကျန်ဒီဂရီသည် 30dB ထက်ပိုကောင်းသည်။
အနည်းဆုံး ကြိမ်နှုန်းကြားကာလ- duplexer ၏ input frequencies နှစ်ခုကြား အနိမ့်ဆုံးကြားကာလသည် ယေဘုယျအားဖြင့် 1.2MHz (ဟန်ချက်ညီသောအမျိုးအစား) ဖြစ်သည်
input impedance: 50 ohms (coaxial)၊ FM transmitter ၏ output impedance နှင့် ကိုက်ညီသည်။
Output Impedance- အင်တင်နာ feeder ၏ input impedance နှင့်ကိုက်ညီသော 50 ohm (coaxial)။
frequency Range: 470-862 MHz
ပါဝါစွမ်းရည်- ရုပ်သံလိုင်းပေါင်းစုံပေါင်းစပ်ကိရိယာ၏ ပါဝါစွမ်းရည်ကို တီဗီထုတ်လွှင့်သူ၏ ပါဝါအရ သတ်မှတ်ရမည်။
ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု - < 0.25dB ( duplexer မှတဆင့် အချက်ပြပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာသော သိမ်ငယ်မှုကို ရည်ညွှန်းသည် )။
VSWR: input terminal ၏ဗို့အားရပ်နေသောလှိုင်းအချိုးသည် 1.1 ထက်နည်းရမည်။
4 Channels transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာတစ်ခုတည်ဆောက်ရန် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများ
လိုင်းများစွာမှ ပရိုဂရမ်များကို တစ်ပြိုင်နက် ထုတ်လွှင့်ရန် ဘရော့ဒ်ဘန်းအင်တင်နာကို ဖွင့်ရန်အတွက် ပါဝါပေါင်းစပ်ကိရိယာတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ဒုတိယအနေနှင့်၊ ပရိုဂရမ်များအချင်းချင်း အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန်၊ ကြိမ်နှုန်းရွေးချယ်ရေးကိရိယာသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ Power Synthesis Device အမျိုးအစားများစွာ ရှိပြီး ၎င်းတို့အနက် အသုံးအများဆုံးမှာ3dB ချိတ်ဆက်ကိရိယာ.
ကြိမ်နှုန်းရွေးချယ်ရေးကိရိယာသည် မြင့်မားသော Q resonators (ဥပမာ axial cavity နှင့် waveguide cavity ကဲ့သို့) ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော filter တစ်ခုဖြစ်သည်။ သီးခြားအခြေအနေများအောက်တွင်၊ အထူးလှိုင်းလမ်းညွှန်အခေါင်းပေါက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ ကြိမ်နှုန်းကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး ပါဝါကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၏နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းမှာ bandpass filter ဖြစ်သည်။ FM တွင် အသုံးအများဆုံး filter unit သည် 1/4 wavelength coaxial resonator ဖြစ်သည်။
▲ သင်ဘာကြောင့် UHF Combiner လိုအပ်သနည်း ▲ သို့ ပြန်သွားရန်
ယခင်အပိုင်းကတော့ အဘယ်ကြောင့် UHF Combiner လိုအပ်သနည်း။ | ကြိုးခုန်
နောက်တစ်ခုက FM Combiners အလုပ်လုပ်ပုံ | ကြိုးခုန်
FM Branched Combiner သည် FM transmitter များကဲ့သို့ ကျဉ်းမြောင်းသော လှိုင်းအချက်ပြများအတွက် သင့်လျော်သည်။ ၎င်းကို မတူညီသော ကြိမ်နှုန်းများဖြင့် band-pass filter နှစ်ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ကြိမ်နှုန်းများနှင့် အပြိုင် ပဲ့တင်ထပ်ကာ အချက်ပြမှုသည် filter circuit ကို အတားအဆီးမရှိဘဲ ဖြတ်သန်းနိုင်သည်။
FM Branched Combiner သည် စစ်ထုတ်မှု၊ ကြယ်ပွင့်အမှတ်နှင့် ချိတ်ဆက်သည့်လိုင်းတို့ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ transmitter အားလုံးကို filter နှင့် connecting line မှတဆင့် star point နှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး Starpoint ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို အင်တင်နာနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
FM Branched Combiner သည် T-shaped tee coupling တစ်ခုဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသော bandpass resonators BPF1 နှင့် BPF2 နှစ်ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ bandpass filter resonator တစ်ခုစီသည် ရွေးချယ်ထားသော frequency နှင့် သက်ဆိုင်ပြီး အခြားသော frequency ကို ပိတ်ဆို့သည်။
FMUSER သည် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ကိရိယာစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အကျော်ကြားဆုံးသော ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစား ပေါင်းစပ်ရောင်းချသူများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ FMUSER မှ ချန်နယ်များစွာနှင့် အပေါက်များပါရှိသော Starpoint ပေါင်းစပ်ကိရိယာကို ဝယ်ယူပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့် စျေးနှုန်းနှစ်ရပ်လုံးကို ပေးစွမ်းသည့်အပြင် ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနအတွက် စိတ်ကြိုက် FM ပေါင်းစပ်မှုစနစ်ဖြေရှင်းချက်ကိုလည်း ပေးဆောင်ပါသည်။
▲ FM Star Point Combiner ဆိုတာ ဘာလဲ ▲ သို့ ပြန်သွားရန်
FM Branched Combiners နှင့် FM Balanced Combiners များ မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
ယခင်အပိုင်းကတော့ FM Star Point Combiner ဆိုတာဘာလဲ | ကြိုးခုန်
သို့ ပြန်သွားရန် အကောင်းဆုံး UHF Combiner ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ | ကြိုးခုန်
ပုံသေ impedance filter အမျိုးအစား balanced duplexer။ ၎င်းတွင် တူညီသော 3dB directional couplers နှစ်ခု၊ resonant cavity bandpass filter လေးခု၊ တူညီသောအလျားရှိသော coaxial feeders နှစ်ခုနှင့် 50 - ohm absorption load တို့ ပါဝင်ပါသည်။ 1-end သည် F3 frequency signal ဖြစ်ပြီး 5-end သည် star diplexer ၏ F1 + F2 signal input port ဖြစ်သည်။
* Star Point Combiner နှင့် မျှတသော Combiner
F3 အချက်ပြမှုသည် ပထမ 3dB ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၏ အဆုံးတစ်ဖက်မှ အဝင်ဖြစ်ပြီး ပါဝါကို 3dB အတွဲလိုက် 1 ဖြင့် နှစ်ပိုင်းခွဲကာ ပါဝါတစ်ဝက်ကို 3-စွန်းနှင့် 4-အဆုံး အသီးသီးရှိသည်။ အစွန်း (၃) ပါး၏ အဆင့်သည် အဆုံး (၁) စွန်းနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး၊ (၄) အဆုံး (၄) ပါး၏ အဆင့်သည် (၃) စွန်း၏ နောက်၌ ၉၀ ဒီဂရီ ဖြစ်သည်။ F3 ပေါ်ရှိ bandpass filter နှစ်ခု၏ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်၊ signal သည် filter ၏ အလယ်မှဖြတ်သွားကာ ဒုတိယ 1dB coupler သို့ ကူးစက်သွားသည် 4-terminal signal သည် 90-terminal signal ၏နောက်တွင် 3° ဖြစ်သည်။
ယခင် 4-terminal အချက်ပြမှုများသည် 90-terminal အချက်ပြမှုများနောက်တွင် 3° ဖြစ်နေသောကြောင့်၊ 3-terminal မှ F6 အချက်ပြမှုများကို အဆင့်အတွင်းပေါင်းစပ်ပြီး ထုတ်လွှင့်ရန်အတွက် အင်တင်နာထံသို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး 3-terminal ရှိ F5 အချက်ပြမှုများကို ပြောင်းပြန်- အဆင့်များ နှင့် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဖျက်သိမ်းသောကြောင့် F3 အချက်ပြမှုများသည် crosstalk ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် F1 + F2 ချန်နယ်များသို့ ဝင်ရောက်မည်မဟုတ်ပါ။ F1 + F2 အချက်ပြမှုသည် တာမီနယ်5ခုမှ အဝင်ဖြစ်ပြီး ပါဝါအား အပေါ်ပိုင်းနှင့် အောက်ချန်နယ်များအဖြစ် ပိုင်းခြားထားသည်။ ပဲ့တင်ထပ်သောအပေါက်သည် F1 + F2 အချက်ပြမှုတွင် စုစုပေါင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုရှိပြီး 6-end တွင် အဆင့်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ကာ 5dB ချိတ်ဆက်ကိရိယာဖြင့် 3-end တွင် အဆင့်ကို ပယ်ဖျက်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ F1၊ F2 နှင့် F3 တို့ကို terminals ခြောက်ခုတွင် ပေါင်းစပ်ပြီး ကြိမ်နှုန်းပေါင်းစပ်မှုကို သိရှိရန် အင်တင်နာသို့ ပို့လိုက်သည်
3dB Coupler ၏ အကျဉ်းမိတ်ဆက်
3dB Coupler တွင် အတွင်းစပယ်ယာ၏ λ/4 terminals နှစ်ခုနှင့် ပြင်ပ conductor ကို port လေးခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး၊ တူညီသော transmission line နှင့် အပြင် circuit အကြားကြားခံအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသော ports လေးခုပါဝင်သည်။ port တစ်ခုစီတွင် 50 ohm သည် တူညီသော လက္ခဏာရပ်များရှိသည်။
F3 ပါဝါအချက်ပြမှုသည် 1-end မှ input ဖြစ်သောအခါ၊ ပါဝါတစ်ဝက်သည် 3-end တွင်ထွက်ရှိပြီး၊ ပထမအဆုံးတွင်ရှိသော၊ ပါဝါတစ်ဝက်သည် 4-end တွင်ထွက်ရှိသည်။ သို့သော်၊ အဆင့်သည် 90-end ၏နောက်တွင် 1° ဖြစ်ပြီး 2-end တွင် output မရှိသောကြောင့် 2-end နှင့် 1-end တို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု သီးခြားခွဲထားကာ မတူညီသောကြိမ်နှုန်းများ၏ signals များကို ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ duplex ကို သိရှိရန် port နှစ်ခု။ အကောင်းဆုံးမှာ၊ 2-end သည် coupler ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမထိခိုက်စေဘဲ 1-end ၏ input impedance သည် frequency နှင့်မသက်ဆိုင်သောကြောင့် broadband လက္ခဏာများကိုပြသသည်။
3dB coupler ကိုယ်တိုင်က ရိုးရှင်းသော duplexer တစ်ခုဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်အသုံးပြုရာတွင်၊ terminal နှစ်ခုသည် အချက်ပြအရေအတွက်အနည်းငယ်ကို အပြန်အလှန်ပြောဆိုနိုင်သောကြောင့် စုပ်ယူမှုခံနိုင်ရည်အား စားသုံးမှုကို စုပ်ယူရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။
Bandpass Filter အကျဉ်းမိတ်ဆက်
band-pass filter သည် အဓိကအားဖြင့် λ/4 end-open terminals နှစ်ခုပါသော resonator နှစ်ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပဲ့တင်သံနှစ်ခုကို အပေါက်ငယ်များဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားပြီး၊ ၎င်းသည် double loop parallel resonant circuit နှင့် ဆင်တူသည်။ input နှင့် output သည် ring-coupled ဖြစ်ပြီး၊ ring coupling area နှင့် coupling aperture area ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းဖြင့် လိုအပ်သော passband လက္ခဏာများကို ရရှိပါသည်။
* transmitter ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၏ချိတ်ဆက်မှုများ
FM Combiners များ၏ စမ်းသပ်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည် အဖြစ်အပျက်/ရောင်ပြန်ဟပ်မှုစမ်းသပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပါရှိသော ကွန်ရက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူအား ရွေးချယ်ပါသည်။ တူရိယာ၏စမ်းသပ်မှုအကြိမ်ရေအကွာအဝေးသည်4~ 1300mhz ဖြစ်ပြီး၊ စမ်းသပ်မှုဒေတာကို တူရိယာပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ဖတ်နိုင်သည်။ တူရိယာ၏ input impedance နှင့် output impedance နှစ်ခုလုံးသည် multiplexer ၏ တူညီသော 50ohm ဖြစ်သည်၊ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဆုံးရှုံးမှု၊ အထီးကျန်မှုဒီဂရီနှင့် ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးခြင်းတို့သည် အလယ်အလတ်အမှားကို ဖယ်ရှားပေးကာ တိုင်းတာမှုရလဒ်များ၏ တိကျမှုကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး ရလဒ်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည့် တူရိယာမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
Intermodulation Frequency ၏ဖြေရှင်းချက်
Multi-channel ပေါင်းစပ်ကိရိယာမှတဆင့် transmitter သုံးခုကိုပေါင်းစပ်ပြီး transmitting အင်တင်နာတစ်ခု၏နည်းလမ်းဖြင့်ထုတ်လွှင့်သည်။ ၎င်းသည် ထုတ်လွှင့်သည့် အင်တင်နာသည် အပြည့်အဝ broadband ဖြစ်ရန် လိုအပ်သည်။ multiplexer ၏ မြင့်မားသော သီးခြားခွဲထားမှုကြောင့် crosstalk ပါဝါသည် အလွန်သေးငယ်ပါသည်။
105.5mhz transmitter ပေါ်ရှိ point frequency filter တစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ပြီး isolation သည် 30dB ထက်သာလွန်သောကြောင့် ၎င်း၏ transmitting antenna သည် signal ကို လက်ခံရရှိသောအခါတွင်၊ လက်ခံရရှိသော signal သည် filter ၏ အပြည့်အဝရောင်ပြန်ဟပ်မှုကြောင့် 105.5mhz power amplifier unit သို့ မရောက်နိုင်ပါ။ intermodulation frequency ကို မဖွဲ့စည်းနိုင်ပါ၊ အနှောင့်အယှက်ပြဿနာကို အခြေခံအားဖြင့် ဖြေရှင်းပေးသည်။
Multifrequency Generation အတွက် Intermodulation Frequency ၏ အဖြေ
ကြိမ်နှုန်းသုံးမျိုးရှိပြီး 105.5mhz၊ 94.2mhz၊ 89mhz၊ ၎င်းတို့အနက် 105.5mhz သည် ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးစွန်းထုတ်လွှင့်မှုအင်တင်နာတစ်စုံနှင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး 94.2mhz.89mhz ကို ဒေါင်လိုက်ပိုလာရိုက်ထုတ်လွှတ်နိုင်သော အင်တင်နာတစ်စုံနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အင်တာနာနှစ်ခုသည် မျှော်စင်တစ်ခုတည်းတွင်ရှိသောကြောင့် 105.5mhz ထုတ်လွှင့်သည့်အင်တင်နာသည် ဤကြိမ်နှုန်း၏ထုတ်လွှင့်ခြင်းအင်တင်နာသာမက လက်ခံအင်တင်နာလည်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည် 94.2mhz နှင့် 89mhz အချက်ပြမှုများကို လက်ခံရရှိပြီး အဆိုပါ signal နှစ်ခုသည် 105.5mhz transmitter power amplifier တွင် intermodulation အချက်ပြမှုများကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်ပေးသည့် ကြိမ်နှုန်းများမှာ 105.5 - 89 + 105.5 = 122mhz ဖြစ်ပြီး အခြား ကြိမ်နှုန်းမှာ 105.5 - 94.2 + 105.5 = 116.8mhz ဖြစ်သည်။ ဤကြိမ်နှုန်းနှစ်ခုကို ထုတ်လွှင့်သည့် အင်တင်နာမှတစ်ဆင့် ထုတ်လွှင့်သည်။ ဒေသတွင်း သွားလာမှု အကြိမ်ရေ ရှိလျှင် ၎င်းသည် အကွာအဝေးတွင် ရှိနေနိုင်သည်။
▲ FM Combiners အလုပ်လုပ်ပုံ ▲ သို့ ပြန်သွားရန်
20kW Starpoint UHF Analog TV Combiner x 1PCS
နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
20kW UHF ATV Starpoint Combiner အကြောင်း သင်သိလိုသည်များ
စစ်ထုတ်မှုများကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် "တံတားနှစ်ထပ်" သည် လည်ပတ်မှုကြိမ်နှုန်းများ၏ ကိန်းဂဏန်းအသစ်များကို လွယ်ကူစွာ ပြောင်းလဲနိုင်စေပါသည်။ 100% modulation ဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် 2MHz အထိ ကပ်လျက် ကြိမ်နှုန်းနှစ်ခုကို ကျေနပ်စွာ ခွဲထုတ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကို ကြိုးဝိုင်းနှင့် ကျယ်ပြန့်သော ကြိုးထည့်သွင်းမှုလိုင်းများအပါအဝင် မတူညီသော double cavity filter နှစ်ခုနှင့် hybrid coupler နှစ်ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ကြိမ်နှုန်းချန်နယ်များကို ခွဲထုတ်ခြင်းနှင့် မြင့်မားသော RF ပါဝါပမာဏနည်းပါးသော ကိန်းဂဏန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာဌာနမှ တောင်းဆိုချက်အရ ဒီဇိုင်းထုတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါတွေကို ဒီ Page မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
20kW UHF Combiner အကြောင်း သင်သိလိုသည်များ
FMUSER 20kW UHF CIB Combiner ၏ လျှပ်စစ်အညွှန်းကိန်း (ကိုးကားရန်သာ)
RF Combiner ကို ဘာကြောင့်သုံးရတဲ့ အကြောင်းရင်းနှစ်ခု
ကျွန်ုပ်၏ RF ပေါင်းစပ်ကိရိယာသည် အဘယ်ကြောင့် အလုပ်မလုပ်တော့သနည်း။
သင်၏ RF Combiner ဘာကြောင့် အလုပ်မလုပ်သည်ကို ရှင်းပြရန် အပိုအကြောင်းရင်းလေးချက်
Multiplexing ဆိုတာ ဘာလဲ ၊ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်လဲ
FMUSER 20kW UHF ATV Starpoint Combiner ၏ လျှပ်စစ်အညွှန်းကိန်း (ကိုးကားရန်သာ)
ကြေးနီ၊ ငွေရောင် ကြေးဝါနှင့် အရည်အသွေးမြင့် အလူမီနီယံသတ္တုစပ်
ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှုနှင့် VSWR နည်းပါးသည်။
ဘတ်ဂျက်ဝယ်သူအတွက် အကောင်းဆုံး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ထုတ်လွှင့်မှုဖြေရှင်းချက်
အသံလွှင့်ဌာနအတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီး ဘက်စုံဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်း
၂၄၀၀ - ၂၄၈၃ MHz
2 x က 10 kW
10 kW / kW 5
d 0.10 dB
d 0.20 dB
≥ 20 dB
≥ 35 dB
NB မှ WB အထီးကျန်
3 1/8 "
~ 45 - 110 ကီလိုဂရမ်
~ 65 - 90 ကီလိုဂရမ်
လူဦးရေများသော ဆင်ခြေဖုံးများသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာသည်နှင့်အမျှ လူနေထူထပ်သော ဧရိယာများကို ဗဟိုပြု၍ ပိုမိုရောက်ရှိနိုင်သည့် ကြီးမားသော အသံလွှင့်စက်ရုံများ ဆောက်လုပ်ရန် ပိုမိုလိုလားလာပါသည်။ အမှန်ပင်၊ ဤအဓိကနေရာများသည် ပို၍တန်ဖိုးကြီးလာသည်၊ ထို့ကြောင့် နေရာတစ်ခုစီကို ၎င်း၏အလားအလာကို အပြည့်အဝအသုံးချရန် အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ Transmitter ဆိုက်တစ်ခုနှင့် သုံးစွဲသူများစွာကြားတွင် ဘုံအင်တင်နာတစ်ခုကို မျှဝေခြင်းဖြင့် ၎င်းကို အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ယင်းကို ပြီးမြောက်ရန်၊ အသံလွှင့်လုပ်ငန်းသည် အမျိုးမျိုးသော အမျိုးအစားနှင့် အရွယ်အစား ပေါင်းစပ်မှုများကို အသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ San Francisco (Mt. Sutro)၊ Toronto (CN Tower)၊ Montreal (Mt. Royal)၊ New York City (Empire State Building) နှင့် Chicago (John Hancock and Sears Buildings)၊ အမြင့်မျှော်စင်များ သို့မဟုတ် တာဝါတိုင်များ၊ VHF-TV၊ UHF-TV၊ FM နှင့် land mobile communications ဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင် တတ်နိုင်သမျှ ရုပ်သံလွှင့်ဌာနများကို စုစည်းရန် အသုံးပြုထားသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် အိမ်ခြံမြေကို စီးပွားရေးအရ အသုံးပြုရုံသာမက အသုံးပြုသူအများအပြားထံ တာဝါတိုင်ကုန်ကျစရိတ်ကို ပျံ့နှံ့စေခြင်းအတွက် အလွန်ထိရောက်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။
စျေးကွက်တစ်ခုတွင် FM လိုင်းများအုပ်စု၏ ပိုင်ဆိုင်မှုသည် ပေါင်းစပ်အသံလွှင့်ဌာနများ တိုးပွားလာစေသည်။ DTV စနစ်များ အကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်အတူ၊ FM လိုင်းများသည် လက်ရှိတာဝါတိုင်များမှ အတင်းအဓမ္မ ခိုင်းစေခြင်းခံရကာ ၎င်းတို့သည် တာဝါတိုင်နေရာများကို မျှဝေသုံးစွဲရန် ပိုမိုလိုအပ်လာကာ ပေါင်းစပ်စနစ်များအတွက် လိုအပ်ချက်ကို တိုးမြင့်လာစေပါသည်။
လိုအပ်ချက်များ FCC သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်း။
အင်တင်နာတစ်ခုတွင် အချက်ပြတစ်ခုထက်ပို၍ထုတ်လွှင့်သောအခါ၊ အချက်ပြမှုများကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု၏ transmitter များသို့တုံ့ပြန်ရန်အခွင့်အရေးမရှိသည့်နည်းဖြင့် အချက်ပြမှုများကို ပေါင်းစပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်ပျက်ကွက်ပါက transmitter များ၏နောက်ဆုံးအသံချဲ့စက်အဆင့်များအတွင်း intermodulation ထုတ်ကုန်များကိုထုတ်ပေးနိုင်ပြီးအင်တင်နာပေါ်တွင်ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။ ဤအရာများကို intermodulation ထုတ်ကုန်များကို "spurs" ဟုယေဘုယျအားဖြင့်ရည်ညွှန်းသည်။ FM လိုင်းများကြားတွင် ဖန်တီးထားသော Spurs သည် FM band တွင်သာမက low band VHF ချန်နယ်များနှင့် FM band များအထက်တွင်ပါ လေကြောင်းလှိုင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ FCC Rule 73.317(d) သည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံမှ G00 kHz ထက် ပိုနေမှုကို ကယ်ရီယာကြိမ်နှုန်းအောက်တွင် 80 dB သို့မဟုတ် 43 + 10log10 (watts in power) dB ဖြင့် လျှော့ချရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။ လက်တွေ့တွင်၊5kW သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော transmitter အထွက်ပါဝါများ လည်ပတ်နေသော ဘူတာများသည် 80 dB လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်ပြီး TPO များ (transmitter power outputs) နည်းပါးသည့် ဘူတာများသည် တွက်ချက်နည်းအရ ကျဆင်းနေပါသည်။
ညစ်ညမ်းမှုကို တားဆီးရန်၊ ထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုစီကို အနည်းဆုံး 40 dB ဖြင့် စနစ်အတွင်းရှိ အခြားအရာအားလုံးနှင့် ခွဲထုတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး 4G မှ 50 dB သည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုကို သေချာစေကြောင်း အတွေ့အကြုံက ပြသထားသည်။ Spur attenuation ကို transmitter turn-around loss နှင့် filtering ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ပြီးမြောက်သည်။ အလှည့်ကျဆုံးရှုံးမှုများသည် transmitter တွင် spurs ကိုဖန်တီးသည့်ပုံစံတွင်မူရင်းဖြစ်သည်။ ဤဆုံးရှုံးမှုများသည် tube-type transmitter များအတွက် G-13 dB အကွာအဝေးတွင် လုပ်ဆောင်လေ့ရှိပြီး 15-25 dB သည် solid-state ယူနစ်များအတွက် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ လှိုင်းနှုန်းမပြည့်မီသော အချက်ပြမှုသည် 40 dB အား လျော့သွားသည်နှင့် ၎င်းသည် transmitter ဆီသို့ spur ဖြင့် transmitter ဆီသို့ ဖြတ်သွားသော bandpass filter များမှတဆင့် 25 dB ကို လျော့သွားစေသည်။ ၎င်းသည် bandpass filters များမှတဆင့်ပြန်သွားသောကြောင့်ဤအစွန်းသည် 40 dB ကိုလျှော့ချသည်။ ရလဒ်မှာ 80 dB သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အနည်းဆုံး 100 dB မှ spur attenuation ဖြစ်သည်။
ယနေ့ကမ္ဘာတွင်၊ ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်မှုသည် အသံလွှင့်ကွင်းဆက်၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ နည်းပညာပိုင်းနှင့် ရှုပ်ထွေးမှုတို့ကို သိရှိနားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ စည်းဝေးပွဲ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ အရ၊ စနစ်ဒီဇိုင်နာသည် တိကျသော အပလီကေးရှင်းများကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်သည်။ မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်ပြီး မှန်ကန်သော ချိန်ညှိခြင်း စည်းဝေးပွဲများသည် သင်၏ အချက်ပြမှုကို အဝေးရှိ ပရိသတ်များထံ ပေးပို့နိုင်ပြီး၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်များကို မှားယွင်းစွာ အသုံးပြုခြင်းသည် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး၊ ထုတ်လွှင့်သူ၏ ကျန်းမာရေး ညံ့ဖျင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
FMUSER နည်းပညာအဖွဲ့မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ စဉ်ဆက်မပြတ် စမ်းသပ်ပြီးနောက်၊ multiplexer ၏ ဘုံချို့ယွင်းချက်မှာ စုပ်ယူမှုခံနိုင်ရည်အား လောင်ကျွမ်းသွားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
အချို့သောရာသီဥတုဆိုးရွားသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် (မိုးကြိုးမုန်တိုင်းများကဲ့သို့) ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၏ feeder စနစ်သည် လျှပ်စီးကြောင်း၏သက်ရောက်မှုကို ပို၍ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ယခုအချိန်တွင်၊ RF ပေါင်းစပ်ကိရိယာသည် မိုးခြိမ်းသံနှင့် ထိတွေ့နေပြီး၊ အကိုင်းအခက်စာသွင်းကိရိယာများစွာ၏ လောင်ကျွမ်းမှုနှင့်အတူ အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ Transmitter အများအပြားတွင် ရောင်ပြန်ဟပ်မှု လွန်ကဲပြီး ဗို့အားကျဆင်းမှု ဖြစ်နိုင်ပြီး စုပ်ယူမှု ခံနိုင်ရည်မှာလည်း လောင်ကျွမ်းသွားနိုင်သည်။ အထိရောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်မှာ absorption resistor ကိုအစားထိုးရန်ဖြစ်သည်။
သင့် RF ပေါင်းစပ်ကိရိယာ အလုပ်မလုပ်ရခြင်းအကြောင်း ရှင်းပြရန် မတူညီသော အကြောင်းပြချက်များစွာရှိပါသည်၊ ၎င်းအား ကွဲပြားစွာ ဆက်ဆံရန်နှင့် ချွတ်ယွင်းချက်ကို ဖယ်ရှားရန် RF နည်းပညာရှင်များ လိုအပ်ပါသည်။ feeder ပျက်သွားသောအခါ သို့မဟုတ် transmitter ၏ ရောင်ပြန်ဟပ်မှု တိုးလာသောအခါ ဂရုပြုပါ။ RF ပေါင်းစပ်ကိရိယာသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်း ရှိ၊ မရှိနှင့် စုပ်ယူမှုအား ခံနိုင်ရည်ရှိမရှိ ပုံမှန်မဟုတ်သည့် အကြိမ်များကို စစ်ဆေးပါ။
ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှုအတွင်း၊ စုပ်ယူမှုခံနိုင်ရည်သည် ပျက်စီးသွားပြီး ခံနိုင်ရည်တန်ဖိုး ပိုကြီးလာသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။ အလုပ်၏အလယ်တွင်၊ transmitter သည် အလွန်အကျွံထင်ဟပ်နေသည် သို့မဟုတ် မြင့်မားသောဗို့အားကျဆင်းသွားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မတွေ့ခဲ့ရဘဲ အင်တင်နာ feeder ၏ VSWR သည်လည်း ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ အကြိမ်များစွာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဂရုတစိုက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက် အကြောင်းရင်းများသည် အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ရလဒ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အင်တင်နာ feeder မူမမှန်ပါက၊ ၎င်းသည် RF ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၏လုပ်ဆောင်မှုကို ထိခိုက်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ main feeder ၏ insulation resistance သည် သေးငယ်သွားနိုင်သည်။ မိုးနှင့် နှင်းများကဲ့သို့ ဆိုးရွားသော ရာသီဥတု သည် ချက်ချင်းပင် ဝါယာရှော့ဖြစ်ကာ အဖွင့်ပတ်လမ်း နှင့် အင်တင်နာသို့ ပိုဆိုးသော ရပ်နေသော လှိုင်းအချိုးကို ယူဆောင်လာမည် ဖြစ်သည်၊ ဤအချက်များအားလုံးသည် ပါဝါအချို့ကို ပြန်လည် ထင်ဟပ်စေမည်ဖြစ်သည်။
RF ပေါင်းစပ်ကိရိယာ၏အညွှန်းကိန်းသည် ပိုဆိုးလာသည်၊ 3dB directional coupler ၏ သီးခြားခွဲထွက်မှုသည် နည်းပါးလာပြီး bandpass filter သည် ကျယ်ပြန့်လာသည်။ ဘုံနိယာမအရ၊ 3dB directional coupler ၏ သီးခြားအဆုံးတွင် ယိုစိမ့်မှုအချို့ရှိနေမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိရပြီး bandpass filter သည် out-of-band signal ကို လုံးဝထင်ဟပ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ isolation end သို့ ပါဝါသည် absorption load ၏ သတ်မှတ်ထားသော ပါဝါထက် ကျော်လွန်သွားသောအခါတွင် absorption load ၏ အပူချိန်သည် မြင့်တက်လာပြီး နောက်ဆုံးတွင် လောင်ကျွမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
modulation သည် အလွန်ကြီးမားပါက RF signal ၏ bandwidth သည် ပိုကြီးလာပြီး absorption resistor သို့ ပေါက်ကြားသော power တိုးလာပါသည်။ transmitter exciter သည် ယေဘုယျအားဖြင့် အကန့်အသတ်မရှိဖြစ်ပြီး အစောပိုင်း modulation system သည် 130% ထက်ပိုလေ့ရှိသည်။
band-pass filter ၏ resonance frequency offset ၊ transmitter ၏ carrier frequency offset ၊ RF combiner နှင့် antenna အကြား impedance mismatch စသည်တို့ကြောင့် power အချို့အား absorbing load သို့ လွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
FMUSER မှ အကြံပြုချက် စုပ်ယူမှုခံနိုင်ရည်အား ပျက်စီးခြင်းသည် အကြောင်းရင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ စုပ်ယူမှုခံနိုင်ရည်အား အချိန်မီ အစားထိုးခြင်းမပြုပါက၊ စုပ်ယူမှုခံနိုင်ရည်မှရရှိသော ပါဝါအား transmitter တွင် ရောင်ပြန်ဟပ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ပိုမိုထိခိုက်မှုဖြစ်စေသည်။
Multiplexing RF Signals ၏ Passageway - RF Multiplexer
Multiplexer သည် ရင်းမြစ်များစွာမှ ဒစ်ဂျစ်တယ်သတင်းအချက်အလက်များကို လိုင်းတစ်ခုတည်းသို့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုသို့ ပို့ဆောင်ရန် ခွင့်ပြုသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ demultiplexer သည် multiplexing ၏ ပြောင်းပြန်လုပ်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် တစ်ကြောင်းတည်းမှ ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်အလက်ကို ယူကာ ပေးထားသော အထွက်လိုင်းအရေအတွက်သို့ ဖြန့်ဝေသည်။
Multiplexing သည် အရင်းအမြစ်တစ်ခုထက်ပိုသော သတင်းအချက်အလက်များကို မျှဝေထားသောမီဒီယာဖြင့် အချက်ပြမှုတစ်ခုသို့ ပေးပို့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် သို့မဟုတ် အန်နာလိုဖြစ်စေသော မည်သည့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွင်မဆို ထုတ်လွှင့်မှုအတွက် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။ ဤချန်နယ်သည် ကြိုးတပ် သို့မဟုတ် ကြိုးမဲ့လင့်ခ်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ သုံးစွဲသူတစ်ဦးစီအတွက် ချန်နယ်တစ်ခုစီခွဲဝေရန် လက်တွေ့မကျပါ။
ထို့ကြောင့် အချက်ပြအုပ်စုတစ်စုကို ပေါင်းစပ်ပြီး ဘုံချန်နယ်တစ်ခုသို့ ပေးပို့သည်။ ၎င်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် multiplexers ကိုသုံးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် multiplex simulation သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Analog signal တစ်ခုသည် multiplexed ဖြစ်ပါက ဤ multiplexer အမျိုးအစားကို analog multiplexer ဟုခေါ်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပြမှုကို ဘီလ်ဆစ်ထည့်ပါက၊ ဤ multiplexer အမျိုးအစားကို digital multiplexer ဟုခေါ်သည်။
RF Multiplexer သည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် များစွာသော အချက်ပြမှုများကို ကြားခံတစ်ခုသို့ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။ ချန်နယ်သည် ရှပ်ကြိုး၊ သတ္တုစပယ်ယာ သို့မဟုတ် ကြိုးမဲ့လင့်ခ်ကဲ့သို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြားခံတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပြီး အချက်ပြများ၏ အများစုကို တစ်ကြိမ်တည်း လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
ထို့ကြောင့် ပြောင်းရွှေ့စရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။ ထုတ်လွှင့်မှုသည် တူညီသောချန်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် တစ်ချိန်တည်းတွင် ဖြစ်ပျက်နေမည်မဟုတ်ပေ။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ multiplexing သည် များစွာသော message signals များကို composite signal အဖြစ် ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် အဆိုပါ message signals များကို common channel တွင် ပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
တူညီသောချန်နယ်ပေါ်တွင် အမျိုးမျိုးသောအချက်ပြမှုများကို ထုတ်လွှင့်နိုင်ရန်၊ ၎င်းတို့ကြားတွင် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် အချက်ပြကို ခွဲခြားထားရမည်ဖြစ်ပြီး ထို့နောက် လက်ခံရရှိသည့်အဆုံးတွင် ၎င်းတို့ကို အလွယ်တကူ ခွဲခြားနိုင်သည်။
ပြောဆိုမည့်အကြောင်းအရာ [Message] *
FMUSER နိုင်ငံတကာအုပ်စု ကန့်သတ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားစိတ်ချရသောထုတ်ကုန်များနှင့်ထောက်ထားစာနာသော ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသည်။
သင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ သွားပါ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
နေရပ်လိပ်စာ: အခန်း 305၊ Huilange BLDG၊ အမှတ် 273၊ Huangpu W Ave၊ Tianhe ခရိုင်၊ Guangzhou 510620၊ တရုတ်နိုင်ငံ
Tel: + 86-139-22702227
> ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။
> FM ရေဒီယိုလိုင်းများ ပက်ကေ့ချ်များကို ပြီးအောင်လုပ်ပါ။
> FM ရေဒီယို Studio Packages
> FM Transmitter Packages များ
> FM Antenna စနစ် ပက်ကေ့ခ်ျများ
> FM အသံလွှင့်စက်များ
> FM အင်တင်နာများ
> STL အင်တင်နာများ
> TV Transmitters
> TV Antennas
> IP ကျော် STL
> STL Link Transmitters နှင့် Receivers များ
> STL ရေဒီယိုလင့်ခ် ထုတ်လွှင့်စက်များ
> STL ရေဒီယို လင့်ခ်လက်ခံသူများ
> RF ချိတ်ဆက်မှုများ
> Antenna Power Dividers
> Antena Coaxial Cable များ
> RF Dumny Load
> RF စစ်ထုတ်မှုများ
> RF ပေါင်းစည်းသူများ
> FM ရေဒီယိုများ
> Power Supply
> FM အသံလွှင့်စက်
> IPTV စနစ်များ
> Drive-in ရေဒီယိုများ
© 2022 FMUSER INTERNATIONAL GROUP LIMITED မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။